Izikhungo - shandong Gaoqiang okusha Material Technology Co., Ltd.
1. Sicela uxhumane nendoda yokuthengisa. Singakusiza kahle:
2. Isevisi yangaphambi kokudayiswa
Sicela usitshele umkhiqizo ofuna ukuwuthenga. Indoda ethengisa izokunikeza umbiko wokuhlolwa ngesithombe sedokhumenti noma ividiyo. Eminye imininingwane yokuhlola ivela eChina, eminye ivela phesheya.
Siqoqe imininingwane ethile kumakhasimende ami. Uma usondelene kakhulu, idatha izoba nenani eliphakeme kakhulu.
Ngemuva kokusetha i-oda, indoda yokuthengisa izokukhombisa ishejuli yokukhiqiza bese ihlola umphumela wokuhlolwa. Futhi gcina isampula elilodwa. Isampula eliboniswe ngosuku, igama lomkhiqizo, izwe. Kuzolunga kubekelwe unyaka owodwa.
3. Isevisi yangemva kokuthengisa
1) Ngenxa yalokhu yizinto zamakhemikhali, kwesinye isikhathi asikwazi ukuxazulula inkinga online. Singandiza siye esitshalweni sakho se-batch futhi sixhumane nochwepheshe wakho. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kokuhlanganiswa kokhonkolo nesitshalo seqoqo. Futhi singakusiza ukuthi uthole indlela esebenza kahle kakhulu ebhizinisini.
2) Izindleko zokuhamba: sithwala izindleko
3) Sinecebo lokuvakashela amakhasimende esikhathi eside nemivuzo yezezimali inqubomgomo minyaka yonke.
Hlela: siyiqembu labantu ngabanye. Sisebenzisana ngezinhloso ezifanayo.
Yabelana: wonke umuntu unamakhono akhethekile. Bayeke benze eyabo indima.
Funda: sizimisele ukufunda ukuze sibe namandla afanele.
Thola: sizimisele ukufuna ithalente ukuze sihlanganyele nathi.
Khulumisanani: sikhuthaza impikiswano phakathi kwabasebenzi. Noma iziphi iziphakamiso ezisiza ekuxazululeni izinkinga nasekuthuthukiseni ikhono lensizakalo leqembu zizothathwa.
Ukunakekela: sizonikeza izisekeli lapho abasebenzi behlangabezana nezinkinga.
I-Shandong Gaoqiang New Materials Technology Co., Ltd. ihlanganisa amamitha ayisikwele angama-9100 endawo yokwakha kanye namamitha ayizikwele angama-600 ocwaningo lwesayensi nelebhu.
Inkampani yethu yakhe umugqa ophelele wokukhiqizwa kukakhonkolo, ukuhlaziywa kwamakhemikhali kanye nelebhu yempahla yomzimba eneShandong University of Building neBeijing University of Civil Engineering, efakwe izinsimbi zesimanje zokulinganisa nokuhlola izinsimbi ezinkulu kanye nezinto zokusebenza. Inkampani yethu ineqembu elinamandla lokucwaninga nentuthuko eliqukethe odokotela abangochwepheshe, amakhosi eChina Academy of Building Science.
Ilabhorethri izohlola izibalo futhi iqinisekise ukuthi kungenzeka ukusebenza kwemikhiqizo emisha ngokuhlolwa okusohlwini unyaka o-1. Kepha ukuhlolwa okuphathekayo kufanele kwenziwe ngaphambi kokusetshenziswa ngenxa yomehluko wosimende nesihlabathi. Ngokwenkonzo yethu ngemuva kokuthengisa, sizonikeza mahhala on_site technical support uma kunesidingo.
Ukuhlanganiswa kokhonkolo: mahhala
Isikhathi: isampula sizothunyelwa ezinsukwini ezi-2 ngemuva kokuthola izindleko ezizwakalayo
Iphakethe: ibhodlela le-HDPE elimhlophe
Ukuveza: DHL noma i-FEDEX
Izindleko zokuveza: ngumthengi
Inqubomgomo: lapho umthengi ebhukha izinto zethu, izindleko eziveziwe ezake zenzeka zizobalwa njengengxenye yenani.
1. wamukelekile vakashela ifektri yami
Uma unentshisekelo kumikhiqizo yami sicela ufike e-china futhi uvakashele inkampani yami. Sizokukhombisa inqubo yokukhiqiza futhi senze isivivinyo odinga ukusibona. ngicela uhambe namasampuli lapho ubuya uyohlola ngosimende nesihlabathi sakho.
Ihhotela: sikubekela ihhotela.
Izindleko Zokuhamba:izindleko zokuhamba zizobalwa njengengxenye yezimpahla lapho ubhukha izinto zethu. sinokholo emikhiqizweni yami ngoba senze okuningi ngokuqhathanisa neningi lazo emhlabeni.
2. Sizovakashela inkampani yakho
Ngenxa yokuthi lezi yizinto zamakhemikhali, kwesinye isikhathi asikwazi ukuxazulula inkinga online. Singandiza siye esitshalweni sakho se-batch futhi sixhumane nochwepheshe wakho. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kokuhlanganiswa kokhonkolo nesitshalo seqoqo. Futhi singakusiza ukuthi uthole indlela esebenza kahle kakhulu ebhizinisini.
Izindleko zokuhamba: sithwala izindleko lapho ubhuka izinto zethu.
3. Sinecebo lokuvakashela amakhasimende esikhathi eside kanye nenqubomgomo yemivuzo yezezimali minyaka yonke.
Uhlobo 1.liquid polycarboxylate superplasticizer
1) IBC ithangi 1000kg ukuba 1200kg ngamunye, 1 × 20 'isitsha kungathatha 20 PC IBC ithangi, Ilebula kungaba njengoba isicelo
2) ithangi le-flexi: 20000kg kuya ku-24000kg ngayinye, isitsha esingu-1 × 20 'singathatha ithangi elilodwa le-pc flexi, i-Lable ingaba njengesicelo
Izinsuku 2 kuya 5 ngemuva kokuthola idiphozi
1. I-TT 30% idiphozi, ne-70% esele ngemuva kokubona ikhophi ye-BL
2.I-LC engenakuguqulwa lapho ibonwa